24 ka tirsanaa Shabaab oo lagu laayay Gamboole
Sida laga soo xigtay saraakiisha ciidamada howl gal ay sameeyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu dilay 24 xubnood oo ka tirsanaa dhiig-cabtada al-Shabaab.
Howlgalka ayaa ka dhacay deegaanka Gamboole oo 48km u jira degmada Jowhar oo ah deegaan muhiim u ah kooxda xagjirka ah ee al-Shabaab. Afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in howlgalladan looga gol lahaa in looga hortago falaagada al-Shabaab ayaa sheegay in xaqiijinta amniga ay muhiimad gaar ah u leedahay Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaaliyeed.
Howlgalka ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in lagu soo qabtay hub iyo qalab kale oo militari oo ay lahaayeen al-Shabaab. Ciidamada Danab ayaa wada howlgallo lagu yareynayo khatarta al-Shabaab waxayna weeraro ka geysteen gobolada Shabeellada Hoose iyo Shabellada Dhexe.